सर्वत्र भ्रष्टाचारः साउनमा मात्रै ३० पक्राउ
Sat, Dec 14, 2019 at 5:05am
धेरै खुर्सानी खान किन मन लाग्छ ? पिरो खानु कत्तिको स्वास्थ्यबर्द्धक ? #आहा खबर# सेना चढेको बस दुर्घटना हुँदा ३० घाइते #आहा खबर# अब ब्रेक्जिट समस्याको समाधान सुरू गरौं : बोरिस जोनसन #आहा खबर# धनुषा बम विष्फोट : प्रहरी इन्सपेक्टर दाहालसहित ३ जनाको मृत्यु #आहा खबर# पर्वतमा २१ सिँचाइ आयोजना निर्माण शुरु #आहा खबर# भूकम्प प्रभावित ७७ विद्यालय भवन पुनःनिर्माण हुँदै #आहा खबर# मध्यराति धनुषामा बम विष्फोट, एकै परिवारका २ को मृत्यु, इन्स्पेक्टरसहित ४ जना गम्भीर #आहा खबर# चिनबाट दैनिक ४५ टन प्याज भित्रिएपछी मुल्य केही सस्तियो #आहा खबर# किन भयो देशभर हिमपात र वर्षा ? चिसोमा कसरी रहने फिट एन्ड फाइन ? #आहा खबर# नियम विपरीतका होर्डिङ बोर्ड हटाउन शुरु #आहा खबर# सिद्धबाबालाई पुनः ३ दिन निगरानीमा राखी अनुसन्धान गर्न आदेश #आहा खबर# बेलायतमा सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री जोनसन बकिङ्गम दरबारमा #आहा खबर# सागका पदक विजेता खेलाडीलाई धुमधामकासाथ नगरपरिक्रमा (फोटो फिचर) #आहा खबर# वैज्ञानिक 'एकीकृत भूमि ऐन' ल्याउने तयारीमा जुट्यो सरकार #आहा खबर# जीवित देवी कुमारीलाई यस वर्षदेखि मासिक १५ हजार भत्ता #आहा खबर#
‘आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई पछिल्लो समय दैनिकजसो भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका घटनाले अर्थहीन बनाएको छ। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ओलीले आफ्नो अगाडिपछाडि कोही नभएको, पैसा कमाउनुको अर्थ नभएको भन्दै भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने भनेका थिए। त्यसपछिका भाषणहरुमा पनि उनले सरकारले शून्य सहनशीलताका रुपमा काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियताले मुलुकभर सर्वत्र भ्रष्टाचार फैलिएको देखाएको छ।
अख्तियारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनको २५ दिनमा मात्र ३० जनाभन्दा बढीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। यही अवधिमा ४५ जनाभन्दा बढीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। यो संख्याले मुलुकमा भ्रष्टाचार कुनै पनि विन्दुमा नघटेको देखाएको समाचार नागरिकमा छ ।